Miaraka Amin’ireo Rà Vaovao Sy Tranainy, Vita Fianianana Ny Parlemanta Vaovao Okrainiana · Global Voices teny Malagasy
Miaraka Amin'ireo Rà Vaovao Sy Tranainy, Vita Fianianana Ny Parlemanta Vaovao Okrainiana
Voadika ny 01 Febroary 2015 14:43 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, Nederlands, English
Dikasarin'ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta Okraniana vaovao eo am-pamakiana ny fianianana.
Ny 27 Novambra 2014 no fivoriana voalohan'ny Parlemanta Okrainiana vaovao azon'ny be sy ny maro natrehana. Voafidy tamin'ny fifidianana natao talohan'ny fotoana tamin'ny 26 Oktobra ireo mpikambana 418-n'ny Rada, ireo voalohany nandray seza hatramin'ny nionganan'ny Filoha Viktor Yanukovych, nikambanan'i Krimea tamin'i Rosia sy ny fiandohan'ny disadisa ara-tafika tamin'ireo mpampisara-bazana tohanan'ny Rosiana any amin'ireo faritra roa any atsinanana.
Rafi-pifidianana mifangaro no nanaovana ireo fifidianana ireo : lasan'ireo antoko politika izay nahazo ny 5 isanjato ny antsasaky ny seza ao amin'ny parlemanta, ary an'ny faritra mifidy olon-tokana ny antsasany.
Iray amin'ireo voaloham-pangatahana nataon'ny mpanohitra any Maidan any Okraina ny fifidianana parlemantera vaovao — indrindra taorian'ny fotoana navaivay tamin'ny Febroary 2014, rehefa voaongan'ny mpanohitra ny Filoha Yanukovych, taorian'ny rà mandriaka. Ireo famantarana avy ao Maidan, indrindra ireo tsiaro momba ny herisetra nataon'ny fitondrana teo aloha tamin'ireo mpanohitra, dia tantara hitan'ny olona maso sy fitaovam-panentanana nitondra nankany amin'ny fifidianana vao haingana tao Okraina.
Isan'ny zavatra iray tena nampitaintaina talohan'ny fifidianana, dia ny fahalalàna raha toa ka mbola ho ao amin'io parlemanta vaovao io indray ireo mpiara-miasa taloha tamin'i Yanukovych- ireo olona nanohana ireo “lalàna jadona” vetivetin'i Okraina ( araka ny iantsoan'ireo mpanohitra azy any Maidan ). Notomorin'ireo mpanao gazety sy ireo mpikatroka mafana fo ireo mpifaninana, tamin'ny fanarahana akaiky ireo fampielezan-kevitra sy ny fandatsaham-bato misy herisetra. Na teo aza anefa izany ezaka izany dia mbola maherin'ny 30 isanjato (64 amin'ny 239) ny solombavam-bahoaka izay mpomba ilay lalàna nampifanolana ihany no voafidy indray ho ao amin'ny parlemanta tamin'ity indray mitoraka ity, tamin'ny anaran'ny tsy miankina, tsy misy ifandraisana amin'ny antoko politika.
Mitondra rà vaovao maro ao amin'ny Rada ilay fifidianana. Ny marina, eo ho eo amin'ny antsasaky ny mpikambana ao amin'ny parlemanta amin'izao dia mpikatroka mafana fo sy mpanao gazety vao voafidy voalohany avokoa. Ahitana miaramila vitsivitsy ihany koa na izany aza ao anatiny.
Isan'ireo solombavam-bahoaka vaovao ireo ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana Sergii Leshchenko sy Mustafa Nayyem, izay nanoratra lahatsoratra iray izay pitik'afo niteraka ilay hetsi-panoherana #Euromaidan, mpikatroka mafana fo iray malaza ao amin'ny “Self-Defense” ( Fiarovan-tena) izay nitaky ny fametraham-pialan'i Yanukovych, mpitarika maro tamin'ireo andianà mpiady an-tsitrapo tafiditra ao amin'io ady any Donetsk sy Luhansk amin'izao fotoana izao io, ary ireo hafa.
Nitarika ny fisainana ho amin'ilay solombavam-bahoaka vaovao Nadiya Savchenko, Okraniana mpanamory fiaramanidina voasambotra tamin'ny ady tany atsinanan'i Okraina ary mbola migadra any Rosia amin'izao fotoana izao, i Taras Revunets, Okraniana mpitoraka bilaogy amin'ny teny anglisy :
Nianiana amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny parlemantan'i #Okraina i Nadiya #Savchenko (tsy ao an-toerana). Gadra an'ady #Okrainiana voatana any #Russia izy.
Nibitsika naneho hevitra momba ny fisian'ireo mpikambana avy amin'ny andianà mpiady antsitrapo sy mpitarika miaramila ao amin'ny parlemanta vaovao ny tambajotran'olon-tsotra OPORA :
Tsy ny akanjo mihaja ihany no anaovan'ireo solombavam-bahoaka vaovao. #рада8
Nanamafy ny fahalanian'ireo “Mpiambina tranainin'i” Yanukovych, toa an-dry Oleksandr Vilkul, piraiminisitra mpanampy taloha indray i Nikita Fatin, mpisera amin'ny Twitter monina any Kharkiv . Ampahatsiahivin'i Fatin amin'ny bitsika ireo mpikatroka mafana fo izay nanipy ireo mpanao politika nampangaina ho nanao kolikoly tany anaty daba be fanariam-pako talohan'ny fifidianana tamin'ny volana Oktobra :
Hametrahan-dry zareo daba be fanariam-pako ho an'i Vilkul ve ao amin'ny “presidium” ? W#рада8
Talanjona ny sasany fa mifampizara seza amin'ireo mpiara-miasa taloha tamin'i Yanukovych ao amin'ny parlemanta ireo mpitarika ady tamin'ny ‘fanoherana ny fampihorohoroana’ sy ilay saribakolin'i Kremlin, Dmytro Yarosh, filohan'ny vondron'ny tia tanindrazana “Right Sector” (Sampana havanana). Novazivazian'ilay mpikatroka mafana fo monina any Kharkiv, Igor Zubkov, io hevitra io tamin'ny nibitsihany ny sarin'ireo olo-manan-kajan'ny “Right Sector” namboarina tamin'ny ‘photoshop’, manàmbana ny hanasazy ireo solombavam-bahoaka izay nanohana ilay ‘ didy jadona’ mahamenatr'i Yanukovych.
Avia aty! Nanangan-tànana [ hanohanana ilay “didy jadona” ve ianao tamin'ny 16 Janoary ?
Nofintinin'i Irina Makarchuk tao amin'ny rindrin'ny Facebook-ny ilay firafitra hafahafa ao amin'ilay parlemanta vaovao :
Fa izany eo ihany, ny vokatry ny fivoriana voalohan'ny [ Fiantsoana faha-8-n'ny Parlemanta] : ny firaisankinan'ny tafika, ny trano fanaovan-gazery, ireo mpanao kolikoly, ireo mpikatroka ary ny yulia (Yulia Tymoshenko – GV)! ‪#‎НоваРада‬ ))
Koa satria alefa mivantana aminà fahitalavitra voatondro manokana ny fivoriana rehetra ao amin'ny Rada, dia toy izao no nilazan'i Oleksandra Koltsova, mpihira sady mpanoratra tononkira no mpikatroka, ny amin'izay mety ho fihodinan'ny ‘ seho amin'ny fahitalavitra’ tahaka izany :
Efa nasiako popcorn (poa-katsaka) sy validol [ fanafody fanta-daza fisorohana tebiteby] ny lisitry ny zavatra hovidiana amin'ity herinandro ity #НоваРада
Avy amin'ny fahasamihafana ara-politika mahazendan'ny Rada vaovao, tsy mahagaga raha fikorontanana no nanombohan'ny fivoriana voalohany. Araka ny fantatra dia izay solombavam-bahoaka tranainy indrindra no hanao ny fianianan'ny parlemanta vaovao, izany dia manome ny andraikitra ho an'i Yukhym Zvyahilsky, olona miteraka resabe ao anatin'ny politika okrainiana. Amin'ny maha-mpanohana ny ‘didy jadona’ sy ireo mpampisara-bazana mpomba Rosiana any Atsinanana azy dia tsy mendrika ny hametraka ny Rada vaovao eo amin'ny fiandrianany i Zvyahilsky. ka maro no tsy nanaiky ny hevitra hamelàna azy hanao io fianianana io. Farany nahita marimaritra iraisanaireo mpanao lalàna, iarahan'ny solombavam-bahoaka rehetra mamaky amin'ny feo avo ilay fianianana.
Naneho hevitra momba ilay lanonana ilay mpanao gazety mipetraka any Kiev, Nastya Stanko :
Tsy naseho akory tao amin'ny fahitalavitra aza i Zvyahilsky [ nandritra ny fandefasana ]. Novakian'i Turchynov [ mpitondratenin'ny Rada teo aloha ] ilay fianianana, raha ny marina.
Nandritra izany fotoana izany, nibitsika sary mampiseho ireo solontenan'ny AutoMaidan ( hetsika iray avy ao anatin'ny Euromaidan) nofamory teo ivelan'ny foiben'ny Parlemanta ny Hromadske.tv, hampahatsiahy ireo solombavam-bahoaka ny fanamafisana ny andrimaso ataon'ny vahoaka amin'ny asany vaovao izay miandry azy ireo.
Nilahatra teo ivelan'ny rindrin'ny parlemanta ny Automaidan. #рада8
Naverin'i Taras Revunets, mpitoraka bilaogy, ilay fahatsapàna malaza iraisan'ny maro, tamin'ny fampahatsiahivana ireo fananteana marobe apetray ny Okrainiana amin'ireo olom-baovao mpanao lalàna ireo sy ny fanamby ambony miandry ery anoloana :
Nanao fianianana ny parlemanta vaovaon'i #Ukraine vao voafidy. Manantena anareo hanao asa tsara ry zalahy. Mahavità soa! Hanara-maso anareo izahay.